दीपेन्द्रकाे अन्तिम दिन ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	दीपेन्द्रकाे अन्तिम दिन ! » Nepal Fusion
दीपेन्द्रकाे अन्तिम दिन !
२०७६ जेष्ठ १९ गते आइतवार
ललितपुर सातदोबाटोस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा १९ जेठमा पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी खेल चलिरहेको थियो । अपराह्न तीन बजे युवराजधिराज दीपेन्द्रबाट खेल हेर्ने कार्यक्रम थियो ।
तर निर्धारित समयभन्दा दश मिनेट पहिले, अपराह्न २.५० बजे, आफैँ गाडी हाँकेर त्यहाँ पुगेका युवराज परिसरमा गाडी नरोकिकन सीधै अगाडि बढे । र, परिसरको एक फन्को लगाएर ठीक तीन बजे रङ्गशालामा प्रवेश गरे । युवराजलाई शिक्षा राज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष रुक्मशमशेर जबरा, खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव विनोदशङ्कर पालिखे लगायत अन्य खेल पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । शुरुमा उनी पौडी पोखरीमा गए ।
पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पौडी खेल सकिन कति दिन लाग्छ ? कुन कुन इभेन्ट समावेश छन् ? खेलाडीलाई बस्ने प्रबन्ध कस्तो छ ? जस्ता विषयमा जानकारी लिए र पौडीको एउटा प्रशिक्षण खेल हेरे । युवराजले पौडीमा नेपालले ‘ब्रेष्ट स्ट्रोक’ इभेन्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याउनसक्छ भन्ने सुझव पनि दिए ।
पौडी संघका अध्यक्ष प्रदीपशम्शेर राणाले स्वीमिङ पुलमा हिटिङ सिस्टम नभएकोले राख्ने सोचाइ भइरहेको जानकारी गराए । युवराजले उक्त सोचाइ राम्रो भएको बताउँदै राजदरबारको स्वीमिङ पुलमा पनि हिटिङ सिस्टम भएको जानकारी दिएका थिए । पौडी परिसरबाट युवराज दीपेन्द्रको सवारी सुटिङ कक्षमा भएको थियो, जहाँ १० मीटर रेञ्जको एयर राईफल र एयर पेस्तोलको प्रशिक्षण भइरहेको थियो ।
खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव पालिखेतिर फर्किएर युवराजले भने, “स्टेडियममा के–के बिग्रेका छन् ती कुराको विवरण मलाई दिनुहोला, सधैँ नचलाए पनि स्टेडियमलाई अपडेट राख्नु पर्छ ।”
त्यस दिन युवराजले पाँचौँ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो पटक समावेश हुने स्क्वास खेलको एउटा म्याच पनि हेरे । नेपाल स्क्वास संघका अध्यक्ष अमर सिंहले युवराजलाई “मौसुफ स्क्वास खेलिबक्सन्छ ?” भनी सोधेका प्रश्नको प्रतिउत्तर थियो, “नखेलेको १०–१२ वर्ष भयो, र्‍याकेटमा धुलो परिरहेको होला ।”
स्क्वासपछि युवराज लन टेनिस कोर्टमा गए र भने, “आई नो नथिङ अबाउट टेनिस, एब्सुलिट्ली आई एम जिरो ।” फूटबल कम्प्लेक्सभित्र थुपारिएको निर्माण सामग्री देखाउँदै उनले भनेः ढुङ्गा–ईटा राम्रोसँग पन्छाउनु, अरू खेलमा त डर छैन तर फूटबलमा हुलदङ्गा हुनसक्छ । भोलिपल्ट २० जेठमा साँढे चार बजेदेखि ग्य्राण्ड रिहर्सल थियो ।
दीपेन्द्रले चार बजे नै आएर सबै तयारी हेर्ने वचन दिएका थिए । खेल पदाधिकारीका अनुसार त्यस दिन उनी प्रसन्न मुद्रामा थिए । अपराह्न चारबजेपछि स्टेडियमबाट निस्केर युवराज दीपेन्द्र सातदोबाटो, बल्खु, बालाजु, लैनचौर हुँदै नारायणहिटी दरबार गएका थिए । सातदोबाटो खेलपरिसरमा युवराज कोटेश्वरको बाटो हुँदै पुगेका थिए । अनौपचारिक सवारी भएको कारण प्रहरीलाई दीपेन्द्रको सवारी कुन–कुन रुटबाट भएको थियो भन्नेबारे कुनै जानकारी थिएन ।